IPhone 13 na ihe niile Apple gosipụtara na Isi okwu ya Akụkọ Ngwa
Ụlọ ọrụ Cupertino ahụla na ọ dabara adaba ime mmemme ya #Aghachị Akụkọ kwa afọ nke ọ na -egosi anyị ọkọlọtọ ya n'ihe gbasara ekwentị mkpanaaka, iPhone. Na emume a, ewepụtala ụdị iPhone 13 na ọtụtụ atụmatụ ọhụụ, mana ọ bụghị naanị ya, n'ezie.
Na mgbakwunye na iPhone 13, Apple ewebatala Apple Watch Series 7 na ọgbọ nke atọ AirPods, ka anyị lelee ngwaahịa ha niile. Mee ka anyị matakwuo nke ọma ngwaọrụ nke Apple bu n'obi ịchịkwa ahịa n'ime afọ a 2021 na ọtụtụ afọ 2022, ngwaahịa ndị a ọ ga -abụ ihe zuru oke?
1 iPhone 13 na ụdị ya niile
2 Apple Watch Series 7, mgbanwe kacha ukwuu
3 New iPad Mini na mmelite nke iPad 10.2
iPhone 13 na ụdị ya niile
Ka anyị buru ụzọ jiri iPhone 13 malite na njirimara ndị ahụ niile ga -ekerịta. Nke mbụ bụ ama A15 Bionic processor, ihe nrụpụta raara onwe ya nye nke TSMC mepụtara Ọ na -ezube ịbụ nke kachasị ike n'ahịa ekele maka teknụzụ GPU agbakwunyere na ike ọkụ. Maka akụkụ ya, ngwaọrụ niile ga -enwe nke ọhụrụ Njirimara ihu 2.0 na ọkwa ya pere mpe ruru 20% iji mee ohere ka mma ma nye nchekwa ka ukwuu mgbe ị na -emepe ihu, akụkụ nke ndị ọrụ na -achọsi ike nke ukwuu, ebe onye na -ekwu okwu na -abanye n'ime ọnụ elu ihuenyo ahụ.
N'aka nke ọzọ, ugbu a iPhones niile ga -enwe otu ụgwọ 18W site na eriri yana 15W site na MagSafe, yana mwekota na nrụzigharị ngwaahịa MagSafe, na -agbanwe agbanwe na ụdị chaja ikuku nke Apple mere nke ọma. N'otu aka ahụ, gbasara nkwukọrịta ikuku Apple ekpebiela ịkụ nzọ na netwọkụ WiFi 6E, ntakịrị mgbanwe nke netwọọdụ WiFi 6 a ma ama, na-emezi nkwụsi ike na nnyefe data, si otú a na-edobe onwe ya dị ka ngwaọrụ na-eduga n'ihe gbasara teknụzụ a.
Maka ihe doro anya, Apple na -agba bọọlụ na ogwe OLED Maka ngwaọrụ ya niile, n'ihe banyere iPhone 13 Mini ọ ga -abụ sentimita 5,4, nke ga -agbago sentimita 6,1 maka iPhone 13 na iPhone 13 Pro wee rute sentimita 6,7 na mbipụta Pro Max nke iPhone 13. Dị ka atụmatụ pụtara ìhè, iPhone dị na mpaghara Pro ga -enwe ọnụego ume ọhụrụ 120 Hz, ọzọ nke njirimara ndị ọrụ na -achọkarị n'afọ ndị na -adịbeghị anya.
Na usoro nke nchekwa nchekwa iji 128 GB dị ka ọkọlọtọ rutere n'ezie.
iPhone 13/Obere: 128/256/512
Otu ihe ahụ na -eme na batrị, Apple na -akụ ya ike kachasị mAh ị jirila taa, ee, ọ gaghị enye chaja agụnyere na igbe iPhone.
Karịsịa anyị nwere mgbanwe na igwefoto nke bụ Oghere sara mbara nwere 12 MP nwere oghere f / 1.6 yana sistemụ nlegharị anya onyonyo dị elu (OIS). Ihe mmetụta nke abụọ bụ a 12 MP Ultra Wide Angle na nke a nwere ike ijide ọkụ karịa 20% karịa ụdị igwefoto gara aga yana na ọ nwere oghere f / 2.4. Ihe ndị a niile ga -enye anyị ohere ịdekọ na 4K Dolby Vision, na HD zuru oke ruo 240 FPS na ọbụna rite uru na ọnọdụ "cinematic" nke na -agbakwunye mmetụta. blur site na ngwanrọ, mana ọ na -edekọ naanị 30 FPS.
iPhone 13 / Obere: Isi ihe mmetụta + Ultra Wide Angle
iPhone 13 Pro / Max: Isi ihe mmetụta + Ultra Wide Angle + Telephoto dị uku + LiDAR
Na ọnụ ahịa n'etiti 709 na 1699 euro Dabere na ngwaọrụ ahọpụtara, enwere ike idobe ha na Septemba 16, ebe mbufe izizi ga -amalite na Septemba 24.
Apple Watch Series 7, mgbanwe kacha ukwuu
Apple Watch na -enwekarị atụmatụ a na -amata nke agbanwebeghị obere ihe n'ime afọ, na -ekepụta ọkọlọtọ na usoro nke dobere onwe ya dị ka ọkọlọtọ nke ika ahụ. Agbanyeghị, Apple ekpebiela na ọ gaghị emelite imewe nke ekwentị Apple Watch Series 7 iji nye gị echiche nke ịga n'ihu na iPhone, iPad na MacBook gị chọrọ. Nke a bụ ka Apple si hapụ akụkụ nke Apple Watch n'ike inye atụmatụ nke yiri nke Apple Watch Series 6, ọkachasị n'okwu ahụ, ebe ihuenyo ugbu a erutela oke ma enwere ike ịhụ ya n'akụkụ, ihe na ndị ọrụ ha na -achọ kemgbe ogologo oge gara aga.
Atụmatụ ole na ole dị na ọkwa ọrụ aka karịa ihe nhazi ọhụrụ na ike nhazi, atụmatụ dị mkpa nke Apple Watch Series 6 ka dị, dị ka electrocardiogram na altimeter. E mere ọtụtụ ihe site na ihe mmetụta ọkụ ahụ nke na -abịaghị nke ọma. Ụdị agba ọhụrụ ya na agba dị iche iche esiteghị n'aka mmelite na nha, n'agbanyeghị agbanyeghị na -ebelata 40%, n'agbanyeghị na anyị ga -enwe ụdị dị na nchara, titanium na aluminom. Ọnụahịa ahụ ga -amalite na euro 429 maka ụdị ngwaọrụ a kacha akpasu iwe anyị ga -aga n'ihu na -enwe nsụgharị nwere LTE ma ọ bụ nke ahụ ga -ejedebe na njikọ Bluetooth + WiFi dabere na mkpa onye ọrụ ọ bụla. Ka ọ dị ugbu a, Apple enyebeghị ụbọchị mmalite ya, ha ga -ahapụ ya maka ọdịda.
New iPad Mini na mmelite nke iPad 10.2
Nke mbụ na-abịa iPad Mini ọhụrụ nke na-eketa ọrụ nke iPad Air, ihuenyo ruo n'ọnụ ya nwere akụkụ dị gịrịgịrị na akụkụ gbara ya gburugburu, 8,3 sentimita asatọ na-enweghị ID ihu ejikọtara ọnụ, yana ID mmetụ na bọtịnụ ike. N'ime iPad Mini ọhụrụ a anyị nwere A15 Bionic ọhụrụ, onye nrụpụta nke ga -esi na -arịgo na iPhone 13 na 13 Pro, yana njikọta 5G dị ugbu a na eriri USB-C iji jikọọ ngwa.
Maka iPad 10.2, ọ na -ejigide ọnụ ahịa ya, ọ naghị emepụta ihe ọhụụ na ọkwa imewe, mana ọ ga -enwe igwefoto 12MP FaceTime ọhụrụ nwere ihe mmetụta 122º Wide Angle na Apple's A13 Bionic processor.
Ndị a bụ akụkọ niile ụlọ ọrụ Cupertino kwupụtara n'oge emume ya taa, ngwa ngwa dị na isi ahịa yana yana ụlọ ahịa Apple anụ ahụ na n'ịntanetị, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịme ndoputa mbụ. A maara nke ọma na Apple na-enyekarị "obere" ngwaahịa nke ngwaọrụ ndị a n'oge mmalite ha, anyị nwere olile anya na anyị agaghị ahụ ụdị ahịrị ndị dị na Storelọ Ahịa Apple dị ka n'oge pre-COVID.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » IPhone 13 na ihe niile Apple gosipụtara na isi okwu ya
Sonos na-ekwupụta Beam nke ọgbọ nke abụọ, ọnụ ahịa maka ego kụrụ